Mifatotra toa faty olona voafono halevina ny fahitana azy ivelany. Nikoropaka ny olona, betsaka koa no niahiahy sao vonoan’olona niniana natao, na koa olona matin’ny valanaretina no nisy nanary. Nisy nampandre ny BMH ao amin’ny fiadidiana ny tanànan’ny Toamasina sy ny Polisy. Tonga teny an-toerana nanao fitsirihana ilay fonosan-javatra ireto farany. Efa nitangorona ny olona, te hahalala ny zava-misy marina. Niparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera facebook rahateo ny sary. Rehefa novahan’ireo tomponandraikitra ny fatorana sy ny fonosana, dia akory ny hagagana fa kidoro spaonjy tsara valona nanaraka ny tsanganany niaraka tamin’ny lamba sy kiraro no tao anatin’ilay lambatsilena. Betsaka no tohina nahita izao tranga izao, tsy vitsy ny nanasokajy azy ho fanakorontanana saim-bahoaka.